Zvakanakira mafuta eesame kune bvudzi uye ganda - AFRIKHEPRI
Batsiro reSesame mafuta kune bvudzi uye ganda
Hondo yeSeed - Rugwaro (2016)
feki, Chikunguru 3, 2020
Iyi inomera inopisa yeaginous herbaceous imwe yeiyo yekare kurimwa (kubva makore 2500 BC muMesopotamia, Syria nePalestine).
Nhasi, sesame inodyarwa kunyanya muIndia, China, Central America uye muPersian Gulf.
Zvibereko zvawo kaputuru kane mhando dzinodarika mazana maviri embeu imwe neimwe. Idzi idzi diki kwazvo dzakakomberedza, dzakareba uye dzakatsetseka mhodzi dzakasviba, dzvuku kana chena ruvara. Kana ikamanikidzwa, idzi mbeu dzinogadzira oiri yemiriwo.
Mafuta avo anowanikwa neA50 - 57%.
Pane mikana miviri yekuwana mafuta aya:
mhodzi dzakabikwa: mafuta akasviba, kunhuhwirira kunotaurwa
mhodzi hadzina kubikwa: mafuta ari pachena, asina kunhuhwirira
Mafuta aya anonyanya kushandiswa kumabvazuva yekubika.
Iyo inonyanya kuverengerwa isina unsaturated fatty acids: 43% oleic acid uye 41% linoleic acid
Inowakanyanyawo mune mapuroteni, fiber, vitamini (kusanganisira vitamin E: pakati pe20 uye 50 mg ye 100 mg) uye mumaminerari emunyu.
Iine sesamolin uye lecithin, maviri anokonzera antioxidants.
Iyo yakanyanya kusunganidzwa yeinoleic acid inobatsira kurwisa chirwere chemoyo, chirwere cheshuramatongo uye yakaipa cholesterol.
Mavhitamini ayo ehupenyu anopa izvo zvinopesana nemaitiro.
Sesame oiri ine lecithin inova yakakosha zvinovaka muviri kune sisituru uye endocrine system.
Sesame oiri yaive mushonga wesarudzo weAyurveda. Iyo yaishandiswa mukuumbwa kwemishonga yezvirwere zvakabatana.
Yakawanikwawo mune chikafu chevaBabylon neGauls. MaChinese kubva muzana ramakore rechinomwe BC, akashandisa mbeu dzeesame kurwisa zvipembenene nekutsva kudiki.
Nemhaka yemafuta ayo anokosha anoita kuti kugadziriswa kwechivara cheganda, kunobatsira kune ganda nemvere. Inoshanda zvakanaka kuburikidza nekutsamwa nekuoma.
Inoshandiswa pakurapa kwemuviri, mhandara sesame oiri inodzora marwadzo akabatana, sciatica, kurwadziwa shure.
Iyo ine iyo pfuma yekutora ma-ultraviolet maarangi, ndosaka ichishandiswa seyakawedzera mune maficha ezuva. Inoita zvinobudirira pane ganda kutsamwiswa (eczema, psoriasis, kuyera). Inotarawo zvipikiri uye bvudzi.
Iko kushandiswa kwemhandara sesame oiri kurwa nemahara radicals. Izvo antioxidant zvikamu "sesamol" uye sesaminol "zvinoita kuti ive yekugadzirisa mafuta.
Kushandiswa kwekunze: kurapa kuoma uye kutsamwa
Kushandiswa kwemukati: kubatsira kurwisana nehutano hwehutano hwehutano
Iyo inoshandiswa kuve fries nokuti inomesa zvishoma.
Sesame mafuta anoshandiswa zvakanyanya mu oriental cuisine.
Snail drool ichidzoka uye kugadzirisa masero ako eganda